Juweriya Alli oo ka jawabaysa hadalkii MW Mustafe ee la xidhiidhay goobaha shidaalka —
Home » Juweriya Alli oo ka jawabaysa hadalkii MW Mustafe ee la xidhiidhay goobaha shidaalka
Juweriya Alli oo ka jawabaysa hadalkii MW Mustafe ee la xidhiidhay goobaha shidaalka
Waan ka xumahay in lagu tilmaamo cabashada shacabka Dhoobaweyn iyo Shilaabo ‘mu’aamarad’ ama conspiracy theory. Dhibaatada shidaalka la xidhiidha ma aha wax cusub, shacabka waxaa wali quluubtooda ku suntan eheladoodii la diley laga bilaabo xilligii shirkada Garmarlka ‘Gewerkschaft Elwerath’ ay 1963 ka hawlgaleysey Jeexdin- 7 ruux ayaa la diley, waxaa ka mid ahaa Gaarne Ali Tarey, curadkiisii iyo 5 nin oo la socotay. Maalintaa laga bilaabo dhibaato isdaba joog ah ayay shacabka ku hayeen shirkadaha shidaalka baadha iyo waliba ciidamada Ethiopia. Wali wax isla xisaabtan ma dhicin.
Warbixintii ku saabsanayd xanuunada ka dhashay goobaha shidaalka een soo saarnay sannadkii hore ma ahayn wax aan maskaxda kasoo alifnay ama wax siyaasad la xidhiidhay. Waxaan xog ka helay dhakhaatiir, shacab, dhibanayaal, iyo khubaro ku takhasusay arimaha shidaalka iyo saameyntooda. Sida caadada u ah, guddi dawlada Ethiopia soo diyaarisay ayaa safar u galay kaliya inay soo beeniyaan warbixintii Guardian-ka intay hal habeen soo seexdeen Dhoobaweyn, kadibna Jigjiga iyo Addis Ababa kusoo laabteen. Waxay ku tilmaameen cabashadii shacabka: propaganda, xog-la’aan, iyo warar been abuur ah, iyo inaysan wax dhibaato ah ka jirin aaga shidaalka. Waxaa xusid mudan dawlad deegaanku in ay ansixisay warbixintas, laakin ay u quudhi waayeen shacabka Soomaaliyeed in lala wadaago natiijadii warbixinta. Hoos ka eeg gunaanadka warbixintoodii. Dabcan ma aheyn baadhitaan madax-banaan.
Dadweynaha ku nool aaga shidaalka ayaa nooga xog ogaalsan cudurada ay ka cabanayaan noocay yihiin. Sidoo kale, haday siduu leeyahay madaxweynuhu ay cudurada la xidhiidhaan cimilada is badaleyso- waa maxay sababta cuduradan ayna uga jirin deegaanka intiisa kale. Intaan hawshaan baadhisteeda ku jirey kaliya ayay dad aan tiradoodu yareyn u dhinteen cancer iyo cuduro astaamahoodu isku mid yihiin.
Imisa geel-jire ayaa intay u dhinteen ‘beer-barar’ meydkooda bil kadib lasoo helay? Imisa ayaa intay dhiig sanka iyo afka kasii daayeen, kadib sidaas ku naf-baxay? Reer Dhoobaweyn iyo Shilaabo ayaa su’aalahaas ka jaawaabi.
Wiilkii ugu danbeeyay ee aan wareysi ka qaado – Khadar Abdi Abdullahi ayaa isna ‘Liver Failure’ u dhintay. Wuxuu ahaa 23 jir.
Aaway Abdiaziz Madadaal, Mahamuud Gaani, Ali Hussein Dheeg, ina Abdullahi Macalin Hassan, ina Gaarne Khalid, ina xuud hassan bidhiidh, ina Ibrahim Hassan Aw-Haruun iyo ina Ali Biihi?
Aaway Abdiqadir Qaaadh Hussein, Dhoombe Gaani Ahmed Yusuf , ina Dahir Coljoog, ina mahamed xuud Hassan, Ina Aden Sahal, Ali-Abshir Digil abdi wacays, Gama’ muxumed wali, iyo Khadar Mohamed Carab?
In siyaasad awgeed loo qariyo ama xaqiro wixii sababay dhimashadooda waa wax aan la aqbali Karin.
Allah ha u naxariisto dhamaantood.